के यो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ? यस्तो छ रहस्य ! -
आफ्नो पहिलो कामको नजिता हेर्न उत्साहित छु - सुजन कोईराला
एउटै गितको लागि, विष्णु माझीलाई दुई लाख रुपैयाँ किन तिर्छन् लगानीकर्ता ?
गोविन्द केसीसँग जसले जोरी खोज्छ, उ सकिन्छ । सक्दो सेयर गरौँ
२ बर्षकी छोरीको लाश प्लास्टिकमा लपेटेर लगे यी दम्पत्तीले : जब कारण खुल्यो दुनियाँकै ह्दय रसायो !
कडा चट्टान रहेको कालापानीमा नेपाली सेनाले बनायो बाटो !
August 8, 2020 August 8, 2020 chothale
वी’र्य र शु’क्रकीट फरक कुरा हुन् । वी’र्यमै अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि हुन्छन् । महिलाको डि’म्बसँग शु’क्रकीटको मिलन सन्तान उत्पत्तिका लागि आवश्यक हुन्छ । सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शु’क्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डि’म्बको मिलनबाट हुन्छ । यौ’नसम्पर्कका बेला पुरुषको वी’र्य स्ल’खलन हुँदा वी’र्य यो’निको पछिल्तिरको भागमा राखिन्छ ।
वी’र्यमा भएका करोडौं शुक्र’कीटमध्ये केही पा’ठेघरको मुख हुँदै पा’ठेघर र त्यसपछि डि’म्बवाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डि’म्ब (अ’ण्डा) सँग असंख्य शु’क्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ । शु’क्रकीट र डि’म्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज (ZY’GOTE)भनिन्छ र त्यही युग्मज पछि विकसित भएर शिशु बन्छ ।
परिवार नियोजनको खाने चक्कीले महिलाको वजन बढ्ने कुरा गरिन्छ, तर यो विरलै मात्र हुन्छ । सामान्यत: व्यक्तिको वजन कि त शरीरमा बोसोयुक्त तन्तु जम्मा भएर बढ्छ, कि त तरल पदार्थ जम्मा भएर । सन् १९६० तिर यस्ता ग’र्भनिरोधक चक्की उपलब्ध हुँदा त्यसमा विशेष गरेर इस्ट्रोजनको मात्रा बढी हुन्थ्यो । त्यसको अधिक सेवनले भोक जगाउने तथा शरीरमा पानी बढी मात्रामा जम्मा हुने भएकाले महिलाको बजन बढेजस्तो देखिन्थ्यो । अहिले पाईने ग’र्भनिरोधका चक्कीमा इस्ट्रोजनको मात्रा साह्रै कम हुने भएकाले त्यस्तो प्रभाव कम वा विरलै मात्र देखिन्छ ।
ग’र्भनिरोधक उपाय जस्तै कि कन्ड’म लगा’उँदा वी’र्य क’न्डममै जम्मा हुन्छ र कन्ड’मसँगै बाहिर निकालिन्छ । नेपालमा सहज उपलब्ध नभए पनि स्पन्ज वा डायफ्रामजस्ता साधनले पनि वी’र्यमा भएका शु’क्रकीटसमेतलाई महिलाको पा’ठेघरको मु’खभित्र प’स्न दिँदैनन् । अन्य गर्भनिरोधको उपाय अपनाउँदा त्यसले वी’र्य स्ख’लनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दैन । पुरुषले ब’न्ध्याकरण गर्दा पनि वी’र्य स्ख’लन हुन्छ नै, फरक यत्ति हो कि उक्त वी’र्यमा शु’क्रकीट हुँदैन ।
वी’र्य बाहिर ननिस्किए मोटाइन्छ ? वीर्यमा भएका शु’क्रकीटमा हुने प्रज’नन क्षमताका कारण त्यसले विशेष स्थान पाएको छ । वी’र्य निर्माणमा धेरै रगत चाहिने भएकाले वी’र्य जोगाउनुपर्ने विश्वास धेरै समाजमा पाइन्छ । वी’र्य खेर गए पुरुष कमजोर हुन्छ भनिन्छ, तर यसको वास्तविकतालाई पनि हेरौं ।
रसायनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यसमा पानी, श्लेष्म तथा शु’क्रकीटको पोषण तथा वातावरण सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक थुप्रै रसायन हुन्छन् । अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि यही वी’र्य थैलीमा आएर बसेका हुन्छन् र वी’र्यस्ख’लन हुँदा रसका साथसाथै बाहिर निस्कन्छ । एक चियाचम्चा वी’र्यमा यस्तै ५ देखि ७ क्यालोरी हुन्छ । तुलनाका लागि एक चियाचम्चा घ्यूमा १ सय १२ क्यालोरी हुन्छ । त्यसैले निलिएको अवस्थामा पनि यो पोषणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुँदैन । फेरि यो कुरा यो’निमा वी’र्य स्ख’लन भएको स्थितिमा पाइने होइन । त्यसकारण वी’र्य यो’निबाट ननिस्किएको कारणले मोटाइदैन्…. Source live18nepal.com
राेचक, समाचाररोचक कुराहरु
September 28, 2020 chothale 0
काठमाडौं । गायिका विष्णु माझी एउटा गीत गाएको दुई लाख रुपैयाँ लिन्छिन् । यो सामान्य अवस्थामा...
काठमाडौं – डा. गोविन्द केसी अहिले १९औं सत्याग्रहका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा छन् । १५ दिनदेखि सत्याग्रह...
September 27, 2020 chothale 0
काठमाडौं । उपचारमा क्रममा सन्तान गुमाएका आमाबाबुले अस्पतालबाट एम्बुलेन्स समेत पाएनन् । यो अमानवीय घटनाले अहिले...